Taliyaha Booliska Puntland oo ka hadlay iska horimaadkii Garoowe | Dhacdo.com
Home Wararka Maanta Taliyaha Booliska Puntland oo ka hadlay iska horimaadkii Garoowe
Taliyaha Booliska Puntland oo ka hadlay iska horimaadkii Garoowe
Taliyaha Ciidanka Booliska Puntland, General Muxudiin Axmed Muuse ayaa waxa uu ka hadlay iska horimaadka uu dhiigga ku daatay ee xalay ka dhacay Magaalada Garoowe ee Xarunta Maamulka Puntland.
Iska horimaadkan oo ka dhacay afaafka hore ee Xarunta Baarlamaanka Puntland ayaa u dhaxeeyay ciidan laga diray Madaxtooyada Garoowe iyo ciidan u daacad ah Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland, Cabdixakiin Maxamed Axmed oo gacanta ku hayay amniga xaruntaasi.
Taliyaha Ciidanka Booliska Puntland ayaa sheegay in ciidanka lagu uruurinayay Xarunta Baarlamaanka Puntland ay u arkayn inay caqabad ku noqon karaan amniga magaalada, sidaasi daraadeedna uu Gudoomiyaha horey uga codsaday in ciidamadaasi oo qaab beeleed u abaabulan uu halkaasi ka kaxeeyo, inkastoo sida uu muujiyay uu taasi ka cago jiiday.
Taliyaha ayaa ku waramaya ka hor inta aanu iska horimaadku dhicin inay halkaasi u direen ciidan uu watay Taliyaha Qaybta, si halkaasi looga saaro maleeshiyada sida uu yiri, balse ay si kedis ah rasaastu ku bilaabatay.
General Muxudiin Axmed Muuse, Taliyaha Ciidanka Booliska Puntland oo la hadlay VOA ayaa ka dhawaajiyay in iminka la xaliyay xiisaddii halkaasi kajirtay, ka dib markii wada hadal lagu dhameeyay in maleeshiyada laga kaxeeyo Xarunta Baarlamaanka, sida uu yiri.
Taliyaha ayaa wuxuu xaqiijiyay in Ciidanka Booliska Puntland ay la wareegeen amniga Xarunta Baarlamaanka Puntland, xaaladuna ay haataan tahay mid degan.
Mar wax laga weydiiyay khasaaraha ka dhashay iska horimaadka ayaa wuxuu sheegay in intii uu Alle ugu talagalay ay ku dhimatay, inkastoo uu dib ka sheegay tirada saxda ah ee ku dhimatay iska horimaadkaasi, oo uu ku sheegay saddex qof.
Iska horimaadkan oo hubka noocyadiisa kala duwan la isu adeegsaday ayaa waxaa xalay laga dareemay guud ahaan Magaalada Garoowe, iyadoona uu dhaliyay hadalhaynta ugu badan ee dadka reer Garoowe.